Amiirka Kuwait oo booqday dalka Ciraaq • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Amiirka Kuwait oo booqday dalka Ciraaq
Amiirka Kuwait oo booqday dalka Ciraaq
June 20, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah ayaa weli wada waan waanta uu doonayo inuu ku xaliyo xiisada ka dhex taagan dalalka Khaliijka iyo waliba Iran.
Waa safarkii ugu horeeyey tan iyo 2012 oo uu Amiirka Kuwait ku tago dalka Ciraaq, waxaana safarkiisan diirada lagu saarayaa sidii loo qaboojin lahaa xiisada u dhaxeysa xulafada Sacuudiga oo uu ku jiro Maraykanka iyo Iran.
Waxaa isla shalay Magaalada Basra ka dhacay duqeyn lala beegsaday xarumaha ay degen yihiin shirkadaha shisheeye ee Batroolka dalkaasi kasoo saara.
Shirkadaha xarumahooda la weeraray ayaa waxaa kamid ah kuwa laga leeyahay Maraykanka ee ka shaqeeya Ciraaq, dalkaasi ayey sidoo kale ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka oo xiligan heegan sare ku jira.
Ciraaq ayaa hada xiriir wanaagsan laleh labada dal ee Sacuudiga iyo Iran isla markaana kamid ah wadamada faro ku tiriska ah ee ka hor yimid go’aanadii kasoo baxay Jaamacada Carabta ee ka dhanka ahaa dowlada Iran.